Uyikhusela njani iAkhawunti yam kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyikhusela njani iakhawunti yam kwi-twitter?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 398
Umsebenzisi, wakube eqinisekisile ukuba iAkhawunti yakhe ye-Twitter inayo ukhuseleko lwakho luyanciphaUyacetyiswa ukuba uthathe la manyathelo alandelayo okukhusela iAkhawunti yakho: Lahla iiTweets ezingafunekiyo ezithunyelwe ngelixa ukhuseleko lusengozini.
Kwakhona jonga iPC yakho ukuze ubone iintsholongwane kunye ne-malware, beka ii-patches zokhuseleko kwindlela yakho yokusebenza kunye nokusetyenziswa, sebenzisa rhoqo ipaswedi eyomeleleyo, cinga ukhetho lokusebenzisa ukungena ngemvume.
En ukuqinisekiswa kokungena, Umsebenzisi unethuba lokwazisa itsheki yesibini ukuqinisekisa ukuba kuphela kwakhe onokufikelela kwiAkhawunti yakhe ye-Twitter hayi kubantu besithathu, ngenjongo engeyiyo yokwenzakalisa.
Ukuphathwa gadalala kwi-Intanethi kwiqonga le-Twitter
Iimeko ezininzi ezibonakalayo zinokubakho kwinethiwekhi yoluntu iTwitter; Njengaye, umzekelo: Ukuphathwa gadalala kwi-Intanethi. Kukho abasebenzisi beTwitter abakhoyo UkuXhatshazwa kwi-Intanethi; Ukuba uMsebenzisi uyamazi umntu osemngciphekweni, unokumnceda ngokujongana nezi Ngcebiso zilandelayo zinikezelwa yi-Twitter:
Umsebenzisi kufuneka azame Qonda imeko, ukumamela ngenyameko kwaye uyithathela ingqalelo imeko yakho; yenza ukuba umntu afune uncedo lobungcali: Therapist, igqwetha, amapolisa okanye omnye umntu othembekileyo, onezicwangciso zokubakhokela kunye nokuphucula imvakalelo.
Njengombukeli, uMsebenzisi unokukhetha ukungakhathali kwi-Abuse ye-Intanethi kwaye afune ukukhusela umntu ochaphazelekayo, ebaxhasa kwiimvakalelo zabo; okokugqibela, xela umxholo kwi-Twitter ulandela imiyalelo kwiqonga le-Twitter.
IBhloko uze ungayihoyi i-ONLINE TWITTER
Ukunxibelelana nenani elininzi labantu kunokuba ngamava atyebisayo; kodwa ikwaboleka ukuba ibe ngumthombo we ukukhathazeka kunye nokungaqondani ukuba umxholo wencoko awuqondwa.
Xa uMsebenzisi ejonga Itwitter ekhubekisayo, kuyacetyiswa ukuba ucinge ngencoko, ujonge kakuhle imeko yeTwitter, emfutshane kwaye injongo yombhali inokuchazwa gwenxa; Kwakhona, phendula kuTwitter ukuze ujoyine incoko kwaye unxibelelane nenkxalabo yakho.
Umsebenzisi unokhetho kwiqonga le-Twitter lokuVimba kunye nokungahoyi iAkhawunti yeeTweets zayo ezihlaselayo. Xa uvimba uMsebenzisi, awufumani lwazi kuye; Awuyi kuyibona kunxibelelwano lwakho lwexesha. Ndicebisa ukungahoyi.
Umsebenzisi akafane afune Nxibelelana noTwitter Isisombululo sayo nayiphi na ingxaki, kuba iqonga likaTwitter likuthembisa zonke izixhobo, imiyalelo, ukhetho kunye nezikhokelo zokuhamba ngenethiwekhi ngoxolo lwengqondo kwaye uyonwabele ngokupheleleyo.
Nangona kunjalo, kukho amaxesha apho uMsebenzisi eyedwa engenakho ukusombulula iingxaki ekubandezelayo kwinethiwekhi yoluntu kwaye kufuneka unxibelelane noTwitter ukuze ufumane uncedo olufunekayo kwiingcali zakho
I-Twitter ibonelela ngoMsebenzisi wayo IZiko loNcedo ibekwe kwicandelo lewebhusayithi yakho; Apha ucacisa inyathelo ngenyathelo inyathelo ngalinye elifunwa nguMsebenzisi ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo ezithi zongamele ukusetyenziswa kwe-Twitter.
1 Ukuphathwa gadalala kwi-Intanethi kwiqonga le-Twitter
2 IBhloko uze ungayihoyi i-ONLINE TWITTER
3 Nxibelelana noTwitter
Ziziphi iimpawu ezifihliweyo zeGmail?
Uyicwangcisa njani ipini yesms kwi-twitter?